🥇 ▷ Dib u eegista Razer DeathAdder Elite: Waa jiir aad u wanaagsan oo qiimo fiican ku fadhiya ✅
Dib u eegista Razer DeathAdder Elite: Waa jiir aad u wanaagsan oo qiimo fiican ku fadhiya
Haddii aad u dhacdo inaad jeceshahay jiirka ciyaarta oo fiican, oo aad ku dhex jirtay adduunka adduunka PC dhowr sano, waad ogtahay in Razer DeathAdder uu yahay saaxiibka ciyaarta ugu fiican tan iyo markii ay ku soo dhacday suuqa 2006. Razer aad ayey u yaqaana runtii. Waxa ay gacanta ku hayaan, markaa had iyo jeer waxay doorbidaan inay sameeyaan cusbooneysiinta naqshadaha yaryar sannadihii la soo dhaafay.
Iyadoo la tixgalinayo tan, noocii ugu dambeeyay ee nooca ‘GameAdder Elite’, jiirka wuxuu ilaaliyaa qaabkiisa raaxada iyo ergonomic ee aan dhammaanteen sifiican u garaneyno, oo xoogaa horumar ah gudaha iyo dibaddaba.
Marka ma habboon tahay inaad iibsato Razer DeathAdder Elite?
Si aad u kooban, nooca ugu hagaagsan ee jiirkaan ayaa ah mid uun cusboonaysiin u ah soosaarka guud ee caanka ah ee Razer. Halka aan ka heli karno is dhexgalka iftiinka RGB Chroma, iyo sidoo kale xoogaa horumar ah oo ku saabsan agabyada keena nolosha ‘Elite’ nolosha.
Markaa, Dhimashada ElAdder ayaa ugu hooseysa jiirka la awoodi karo oo leh tilmaamo aad u xiiso badan. Soosaarida 7 badhan oo barnaamij lagu diyaarin karo iyo sidoo kale ugu badnaan DPI oo ah 17,000 unug. (In kasta oo ugu badnaan DPI ay muddo dheer joogsatay inay noqoto tiro ka koobnaanta tayada)
Taasi waxay tidhi, waxa runtii muhiim ah waa 1000Hz ‘Codbixinta’, iyo dabcan, dhaqdhaqaaqa aadka u dhakhso badan ee dareemayaasha jiirka ay ku qaadi karaan dhibaato la’aan.
Maxay dabcan aad u badan tahay waxaa sabab u ah 5G ‘Custom’ dareemayaasha in Razer abuuray isaga oo kaashanaya Pixart. (Waxaa loo yaqaanaa soosaarida dareemayaasha ugu fiican ee kumbuyuutarka PC-ka)
Qaabkaan, qalabka ‘Razer DeathAdder Elite sensor’ wuxuu awood u leeyahay inuu xareeyo xawaareynta ilaa 50G iyadoo la ilaalinayo korjoogteynta dusha sare illaa 450 ”daqiiqaddiiba. Tani waxay gelineysaa ‘DeathAdder Elite’ meesha ugu sarreysa hoggaamiye-kooxeedyada haddii ay jirto horyaal jiir!
Nasiib wanaag, wax qabadkan oo dhammi wuxuu ku socdaa xirmo aad u jaban oo loogu talagalay inta badan boostaha, oo ku kacaya qiyaastii € 79. (Si kastaba ha noqotee, maadaama la siidaayay dhowr sano ka hor, waxay u badan tahay inay kugu hesho qiyaastii 50 €)
Marka la soo koobo, ‘Elite’ dhererkiisu waa 127 mm dhererkiisuna waa 70 mm, oo miisaankiisu yahay 105 garaam oo keliya!
Taasi waa, waxaan ka hadleynaa mid ka mid ah jiirarka ugu fudud uguna fudud uguna isticmaalka badan. Sidan, haddii ay waxyar ‘qarsoon tahay’ jiirka aad isticmaaleyso, waxay u badan tahay inaad la qabsan karto badeecadan.
Fikradayda, waxaa jira cillad keliya… Xaqiiqda ah inaysan ahayn jiirka wireless! Maaddaama aan shaqsiyan necbahay in fiilada la jiido miiska, laakiin qiimaha iyo tayada, waxay ila tahay in ay tahay badeecad qurux badan oo qabow gamer kasta hami badan oo aan dooneynin lacag badan.
Ugu dambeyntiina, haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato Razer DeathAdder Elite, guji halkan.